Translate soll from German to Burmese - MyMemory
Results for soll translation from German to Burmese
Soll gedit übereinstimmende Klammern hervorheben?
ကိုက်ညီသော ကွင်းကို အရောင်မျဉ်းဖြင့်ပြ
Soll Brasero verborgene Dateien filtern?
Empathy soll die Genauigkeit der Ortsangabe verringern
တည်နေရာတိကျမှု ကို အမ်ပသီ လျှော့ချသင့်သည်
ဣသရေလအမျိုး၌ ကျိန်ဆို၍ ပူဇော်သမျှတို့ကို လည်း သင်ဆိုင်ရမည်။
သင်တို့တွင် အကြီးဖြစ်သောသူသည် သင်တို့အစေခံဖြစ်ရ၏။
Eine Jungfrau soll er zum Weibe nehmen;
ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ထိုပွဲကို ခံရကြမည်။
ငါပေးရမည်အခကို ပြောပါ၊ ငါပေးမည်ဟု ဆိုလေသော်၊
Soll Brasero ungültige symbolische Verknüpfungen filtern?
သင်တို့နေသောအိမ်သည် သင်တို့၌ လူဆိတ်ညံလျက် ကျန်ရစ်ရ၏။
Das Schlagwort welches im Dokument gesucht werden soll
ဖိုင်အတွင်း ရှာဖွေရန် စကားလုံး သို့မဟုတ် စကားစု
Und ein Haar von eurem Haupte soll nicht umkommen.
Währung, in welche die aktuelle Berechnung umgewandelt werden soll
Einheit, in welche die aktuelle Berechnung umgewandelt werden soll
ယေရှုကလည်း၊ သင်၏မောင်သည် ထမြောက်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ပြည်သားတို့တွင် မင်းသားဖြစ်သောသူသည် သူတို့ ဝင်သောအခါ ဝင်ရမည်။ သူတို့ထွက်သောအခါ ထွက်ရမည်။
Kain soll siebenmal gerächt werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal.
ကာဣနသည် ခုနစ်ဆသောတရားကိုရလျှင်၊ အကယ်၍လာမက်သည်၊ အဆခုနှစ်ဆယ် ခုနစ်ဆသော တရားကို ရလိမ့်မည်ဟု မိမိမယားတို့ကိုပြောဆို၏။
Legt fest, ob die Kontaktliste in Chaträumen angezeigt werden soll.
စကားပြောခန်းများတွင် ဆက်သွယ်သူစာရင်းကို ပြရန် လိုမလို
tu sei un cretino (Italian>English)bijections (English>Russian)it is getting used (Italian>English)affixes (French>Latin)joseph zimmer (Dutch>French)slogan tungkol sa mga hayop na ibong (Tagalog>English)freetts (English>Vietnamese)ramius (Indonesian>Chinese (Simplified))chut land photo (Russian>English)vallfogona (Maltese>English)boulevard (Dutch>Slovak)imizuzu (Xhosa>English)bhagwan tumhare sath hai (Hindi>English)sloga (Spanish>English)unix (Croatian>English)mawalan ng pake (Tagalog>English)証券の満期日 (Japanese>English)【上海】启运 (Chinese (Simplified)>English)similiter (Latin>Italian)επανατοποθέτησης (Greek>Spanish)elektronisch (Dutch>Macedonian)non est in alio aliquo salus (Latin>French)tetyana (Indonesian>English)magistrum audiamus ! (Latin>French)leiter (German>Slovak)